FAMATSIAN-DRANO AO FIANARANTSOA : Niditra an-tsehatra namaha ny olana ny Minisitera
Mizaka ny voka-dratsy ateraky ny fahasimban’ny tontolo iainana ny Faritra Matsiatra Ambony. 26 novembre 2020
Araka ny tombana nataon’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoaa lovain-jafy dia simba tanteraka noho ny fanimbana fahatany ny ala ny nofon-tany any amin’iny Faritra iny, hany ka kely sisa ny ampahan-tany afaka mitroka sy mitahiry rano. Vokatr’izany manomboka efa ambany ny fahazoan-drano ao an-tampon-tanànan’i Fianarantsoa. Manampy trotraka ihany koa ny tsy fisian’ny rotsak’orana. Misedra olana sahady ireo mponina eo anatrehan’izany.
Niditra an-tsehatra nitondra vahaolana manoloana ny fahasarotan’ny fahazoan-drano ao Fianarantsoa ny Minisiteran’ny Rano, fidiovana ary ny fanadiovana. Fantatra fa hisy ny fametrahana milina ao Ambatomena izay toerana misy renirano saingy rano maloto, ka amin’ny alalan’io milina io no hanadio izany ho rano fisotro madio azo ampiasaina amin’ny fiainana andavanandro. Ankoatra izay, hisy ihany koa tetikasa ny fitarihan-drano ao Antarambiby, izay mbola lavitr’ezaka hatreto. Ho an’ireo toerana tena tsy maintsy mila rano isan’andro toy ny trano fonenann’ny mpianatry ny Oniversite, ny hopitaly manara-penitra sy ny hopitaly ao Tambohobe dia amin’ny alalan’ny kamiao siterna no hamatsiana rano azy ireo.
Marihina fa anisany miara-miasa akaiky amin’ny famahana ny olan’i Fianarantsoa ny Minisiteran’ny Rano sy ny Minisiteran’ny tontolo iainana izay samy manao ny asa manandrify azy avy. Ity farany izay mitady ny fomba rehetra ahafahana manamafy ny ady amin’ny doro tanety ary mba hahafahana mampitombo ny velaran-tany azo hambolena hazo.